I-China Drop On Glass Beads BS6088B Ukuvelisa kunye neFektri | OLAN
Ngenxa yobukho beglasi yeglasi kumphezulu wayo ibonisa ukukhanya kweemoto, izithuthuthu kunye neebhayisikile, ukumakisha kwendlela yeglasi kusetyenziswa ukukhokela abasebenzisi bendlela ebumnyameni. Nini ......
Ngenxa yobukho beglasi yeglasi kumphezulu wayo ibonisa ukukhanya kweemoto, izithuthuthu kunye neebhayisikile, ukumakisha kwendlela yeglasi kusetyenziswa ukukhokela abasebenzisi bendlela ebumnyameni. Xa uqhuba ebusuku, ukukhanya kwesithuthi kubuyiselwa kwiliso lomqhubi, ukuze umqhubi abone indlela eya phambili ngokucacileyo kwaye aqhube ngokukhuselekileyo. Ukuze ubuhlalu buphindaphinde ukukhanya, iipropathi ezimbini ziyimfuneko: ukungafihli kunye nokujikeleza. Amaso enziwe ngeglasi anazo zombini ezi mpahla. Isidingo sokubonisa elubala kunye nokujikeleza kungabonakala kubalulekile ukuba ulandela indlela yokukhanya njengoko ingena kwibhondi efakwe kwindlela yokumakisha yendlela. Iglasi yeglasi kufuneka ibonakale ukuze ukukhanya kudlule kungene kuphume kwinqanaba. Njengoko i-ray yokukhanya ingena kwi-bead iphinda ikhutshwe ngumbuso ojikeleziweyo webhedi apho ifakwe kwipeyinti. Ukukhanya okubetha umva wentsimbi enombala wepeyinti kubonakala kumgangatho wepeyinti, kunye neqhezu elincinci lokukhanya elibuyela kumthombo wokukhanyisa.
Ukuqinisekisa inqanaba eliphezulu lokubonakala kuzo zonke iimeko zemozulu, u-Olan uphuhlise amabala eglasi ahlukeneyo afanelekileyo kuhlobo ngalunye lwesicelo.
Kukho amabakala amabini aqhelekileyo ngexesha lesicelo: I-Premix kunye neDrop-on
I-Premix (Intermix), yayisetyenziselwa ukudityaniswa nepeyinti ngaphambi kokuhluba indlela. Njengokuba iipeyinti zinxitywa, amaso ayatyhileka anika ukubonakala okuphuculweyo kokumakishwa kwendlela.
Idrophu, ibidla ngokulahlwa kumphezulu wepeyinti osandula kuhlanjwa endleleni ukunika ukubonakala okuphuculweyo kwangoko kwabaqhubi ebusuku.
Ukubonakala emini nasebusuku kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu, ukusebenza ngokuchasene ne-skid, ukunxiba ukumelana kunye nokuqina zizinto ezibalulekileyo kwiimpawu ezifanelekileyo zendlela. U-Olan uvelisa ubuhlalu beglasi kuzo zonke iintlobo zeemveliso zokumakishwa kwendlela ezinje ngepeyinti esekwe kwisiseko- kunye nepeyinti ehanjiswa ngamanzi, i-thermoplastics kunye neenkqubo ezi-2 zecandelo.
Egqithileyo 1.7nd Iibhola zeglasi zokumakishwa kwendlela
Okulandelayo: Ubungqina beglasi egumbini lokumakishwa kwendlela
Drop on Glass Beads ngePeyinti yokumakishwa kwendlela
Yehla kuhlobo lweGlasi yeGlasi
Iibhola zeglasi Tj
T446-2001 Yehla KwiNdlela yokumakisha